Iiholide zokuhamba ngeenqanawa - Yeyiphi eyona ndawo idumileyo yokuya? | Ukuhamba kwe-Absolut
USusana godoy | | EGrisi
Ukuba ufuna ukubeka ecaleni inqwelomoya kunye nemoto okanye uloliwe, akukho nto ifana nokubheja kweyona ndlela ikhethekileyo yokuhamba. Iholide zokuhamba ngeenqanawa zihlala yenye yezo zimvo kufuneka uzifezekise kube kanye ebomini bakho. Inokuba luhambo lokuthandana ukuba ukhetha okanye usapho, kuxhomekeke kwiimfuno zalowo nalowo, kodwa kuzo zombini iimeko ukulindeleka kwamaphupha ethu kuya kuzalisekiswa. Ngaba awungethandi ukuzizalisekisa?
Yiyo loo nto emva kwalo lonke elixesha lobhubhane, kufuneka sibhiyozele ukubuyela kukhenketho ngesimbo. Ngobulumko ewe, kodwa ukufezekisa loo maphupha siwakhankanyileyo kwaye afihliwe ixesha elide. Sikuxelela konke izibonelelo zolu hambo kunye neendawo ozithandayo zokundwendwela.
1 IGrisi: Enye yeendawo eziphambili zokuhamba ngeenqanawa
2 Kutheni uhamba ngenqanawa?
3 Iiholide zokuhamba ngenqanawa, nini ukubhukisha?
4 Ndifuna ntoni ukwenza ulwandle lweMeditera
IGrisi: Enye yeendawo eziphambili zokuhamba ngeenqanawa
Nangona kuyinyani ukuba singathetha ngeendawo ezininzi zokufikela ngohlobo lweeholide zokuhamba ngenqanawa, iiItrike Islands zezinye zeentandokazi. Ayinamsebenzi ukuba sele uye kuloo ndawo, kuba ngenxa yale ndlela yokuhamba, uya kuyifumana ngendlela ekhethekileyo ngakumbi. IMeditera ihlala iligugu lokuyifumanisa kwaye ngenxa yoko, iGrisi lelona litye layo liqaqambileyo.. I Uhambo oluya eGrisi Yenye yezona zikhethiweyo kuba le ndawo inobutyebi obukhethekileyo bezinto zakudala, yiyo loo nto kusishiya imihlaba eya kuthi iboniswe kwi-retina yethu.
Kodwa ayinguye yedwa kodwa ukumisa eAthene kunye neAcropolis yayo iya kuba yenye yeendawo eziphambili, ngaphandle kokulibala iKrete, kuba inamazibuko amabini eenqanawa zokuhamba ngenqanawa. Apho ungandwendwela Ibhotwe laseKnossos, eliya kukothusa ngokuhlala kwayo kunye nenqaku eliphambili kwimpucuko yamaGrike. Uvile ngokuqinisekileyo ngeMykonos ngeelwandle zayo. Ngenxa yoko, yenye yeendawo ezikhethiweyo xa umisa kuhambo lwakho. Ukufikelela eSantorini kunye nokutshona kwelanga okudumileyo. Ngoku uya kusiqonda ngakumbi ukuba kutheni iGrisi neMeditera yenye yeendawo eziphambili!
Kutheni uhamba ngenqanawa?
Nangona kusenokubonakala ngathi ngumbuzo esaziyo ukuba uza kuwuphendula njani, siza kukunika izizathu ezimbalwa zokubhukisha kwakho. Kucacile ukuba inqanawa yokuhamba ngenqanawa Siza kusisa kwiindawo ekungasoloko kulula ukufikelela ngazo ngezinye iindlela zothutho. Kungenxa yoko le nto ukuba uyinto ongayenzi rhoqo, ungayiphila ngakumbi ngakumbi. Ukuqala kuloo nto ngamava amatsha ngokupheleleyo kunye noyilo, uya kuba nenketho yokwenza imisebenzi eyahlukeneyo kodwa ngaphandle kokushiya indawo enye. Kuba kwisikhephe uya kufumana imisebenzi yasemini, kunye nemidlalo, ukuzonwabisa, ixesha lokuphumla lokuphumla nokunye okuninzi. Yonke into yenzelwe ukuba ukonwabele ukuhlala kwakho!
Iiholide zokuhamba ngenqanawa, nini ukubhukisha?
Eyona nto intle kukuba, njengalo naluphi na uhambo oluxabisa ityuwa yalo, kungcono ukwenza ukubhukisha ngokukhawuleza. Inkqubela phambili yiyo yonke into ukuze ube nakho ukucwangcisa ngcono. Ukuba ufuna ukugcina encinci, akukho nto ilunge ngakumbi kunokungakwenzi ngexesha eliphezulu kwaye ulinde de kube ngu-Septemba ukuyifumana. Ukusukela ukongeza, amaqondo obushushu ngamanye amanqaku oza kuwandwendwela aya kuba ngaphakathi kuluhlu olunokufikeleleka ngakumbi ukuze ukonwabele uhambo ngalunye ukuya kolona lupheleleyo. Nangona kuyinyani ukuba unyaka wonke unokwenza ukubhukisha kwakho ngokusekwe kwiimfuno zakho. Kuba ukuba uhamba nosapho, uyakufuna indawo ethe kratya kwaye kungcono ukuba uhambe phambili ngaphambi kokuba uphume kwiindawo. Khumbula ukuba kuya kuhlala kukho izibonelelo onokuzisebenzisa ukugcina ipinki elungileyo.
Ndifuna ntoni ukwenza ulwandle lweMeditera
Nje ukuba ukhethe kwaye ubhukishe uhambo lwakho kunye neentsuku oza kuzichitha kwikhefu lakho lokuhamba ngenqanawa, amathandabuzo ayavela, kuba awuzange uhambe ngale ndlela yothutho. Kodwa ungakhathazeki kuba akukho nto yahlukileyo kwabanye obaziyo. Into ebalulekileyo kukuba uphumle kwaye uzonwabise ngokupheleleyo kuba isikhephe sinakho konke okudingayo. Nangona kuyinyani ukuba indala into onokuyenza kukuthabatha iimpahla zombini ukuze ukhululeke emini kwaye ube sesikweni ngakumbi ebusuku. Oku kwenzelwe ukuba ukhwele.
Kodwa xa sisenza izinto zokumisa esifuna ukuzonwabisa, kuyacetyiswa ukuba ukhuphe esona sitayile sakho sikhululekileyo nesingaqhelekanga. Ke ngoko, kufuneka sisoloko sinxiba izihlangu ezifanelekileyo kwaye ezo mpahla zikwalungile. Olu hlobo lohambo, khumbula ukuhlala uphethe ubhaka omncinci onezinto ezisisiseko, kunye nebhotile yamanzi kunye nokukhuselwa lilanga. Gcina ukhumbula ukuba kwezinye iindawo oza kuzindwendwela, abavumeli ukungena ngeempahla ezimfutshane kakhulu kwaye yinto ekufuneka ithathelwe ingqalelo. Ngokuqinisekileyo ngoku uya kucaca malunga nendawo oya kuyo, indlela yakho yezothutho kunye neeholide zakho ezinkulu ezikulindeleyo!
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhamba kwe-Absolut » Ikhefu lokuhamba ngeenqanawa: Yenza Onke Amaphupha Akho Azaliseke!
Ukusebenza phesheya: Ngawaphi amazwe awona manqanaba aphezulu efayibha?